तपाईँको प्रियजनको मृत्यु हुँदा
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा किन्यारवान्डा किर्गिज किलुबा कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिली साङ्केतिक भाषा चुवाबो चेक जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टोंगन डच डेनिश तामिल ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेपाली न्यु जील्याण्ड साङ्केतिक भाषा पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बाश्कीर बिकोल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा मल्यालम माओरी माकुवा माया मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाओशियन लाट्भियन लुगान्डा वलिसियन वेल्श वोलाइटा सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिबेम्बा सेत्स्वाना सेबूआनो सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको समय सम्झँदै माइक भन्छन्‌: “मैले आफ्नो भावनालाई जबरजस्ती आफूभित्रै गुम्साएर राखेँ।” त्यसो गर्नु भनेको पुरुषार्थ देखाउनु हो जस्तो माइकलाई लाग्थ्यो। तर त्यसो गर्नु ठीक होइन रहेछ भनेर तिनले पछि महसुस गरे। त्यसैले एक जना साथीले हजुरबुबा गुमाउँदा उसलाई कसरी सान्त्वना दिने भनेर माइकलाई थाह थियो। माइक भन्छन्‌: “केही वर्षअघि भएको भए म आफ्नो साथीलाई पिठिउँमा थपथपाउँदै ‘तिमी लोग्नेमान्छे हौ भनेर नबिर्स’ भन्थेँ होला। तर मैले त्यसो गरिनँ। बरु उसको कुममा हात राख्दै यसो भनेँ: ‘आफ्नो भावनालाई आफूभित्रै गुम्साएर नराख। आफ्नो भावनालाई गुम्साएनौ भने तिमीलाई यो चोट सहन सजिलो हुन्छ। तिमी अहिले एक्लै बस्न चाहन्छौ भने म जान्छु। तर बस भन्छौ भने पनि बस्छु। जेहोस्‌, आफ्नो भावना व्यक्‍त गर्नचाहिँ नहिचकिचाऊ।’”
मेरिआनले पनि आफ्नो पतिको मृत्यु हुँदा आफ्नो भावनालाई गुम्साएर राख्ने दबाब महसुस गरेकी थिइन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “अरूमा नराम्रो प्रभाव पर्ने हो कि भनेर साह्रै चिन्ता लागेकोले मैले आफ्ना सबै भावनाहरू गुम्साएर राखेँ। तर अरूको अगाडि बलियो भएको जस्तो देखाउँदा मलाई झनै गाह्रो भइरहेको थियो। मैले आफ्नो परिस्थितिलाई राम्ररी केलाएँ र आफैलाई भनेँ, ‘रुन मन लागिरहेको छ भने रोऊ। आफूलाई ज्यादै बलियो देखाउने कोसिस नगर। मनमा उर्लेर आएका भावनाहरू व्यक्‍त गर।’”
त्यसैले माइक र मेरिआन दुवै यस्तो सुझाव दिन्छन्‌: आफ्नो शोक खुलेर व्यक्‍त गर्नुहोस्‌! तिनीहरूको कुरा सही हो। किन? किनकि मनको बोझ हलुका गर्न शोक व्यक्‍त गर्नु आवश्‍यक छ। आफ्नो भावना व्यक्‍त गर्दा मनमा कुरा गुम्सिन पाउँदैन। शोकमा पर्दा उत्पन्‍न हुने भावनाहरूबारे सही ज्ञान पाएका छौँ भने शोक व्यक्‍त गर्नु स्वाभाविक हो भन्‍ने कुरा बुझ्नेछौँ अनि आफ्ना भावनाहरूलाई सही दृष्टिकोणले हेर्न सक्नेछौँ।
हुनत सबैले एउटै किसिमले शोक व्यक्‍त गर्छन्‌ भन्‍ने छैन। साथै भावनात्मक चोट कत्तिको गहिरो हुन्छ भन्‍ने कुरा परिस्थितिमा पनि भर पर्छ, जस्तै: आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको अचानक मृत्यु भएको हो वा लामो समय बिरामी परेपछि मृत्यु भएको हो। जेहोस्‌, आफ्नो भावनालाई जबरजस्ती दबाएर राख्नुभयो भने तपाईँलाई शारीरिक र भावनात्मक रूपमा झनै गाह्रो हुनेछ। त्यसैले शोक व्यक्‍त गर्नु तपाईँको लागि निकै फाइदाजनक हुनेछ। त्यसोभए शोक कसरी व्यक्‍त गर्ने? धर्मशास्त्रमा दिइएका केही व्यावहारिक सुझाव विचार गरौँ।
शोक कसरी व्यक्‍त गर्ने?
कुराकानी गर्नु शोक व्यक्‍त गर्ने एउटा उत्तम तरिका हो। बाइबलकालीन समयका अय्युबले एकै पटकमा आफ्ना दसै जना छोराछोरी गुमाउनुपऱ्‍यो र अरू हानि-नोक्सानी पनि बेहोर्नुपऱ्‍यो। त्यसबेला तिनले यसो भने: “म यो जीवनदेखि वाक्क भइसकेँ। म धीत नमरुन्जेल गुनासो गर्नेछु। म आफ्नो मनको तीतोपन व्यक्‍त गर्नेछु।” (अय्युब १:२, १८, १९; १०:१) अय्युबले आफ्नो मनको वेदना थामेर राख्न सकेनन्‌। तिनी त्यो “व्यक्‍त” गर्न बाध्य भए। हो, तिनले त्यसबारे अरूसित कुराकानी गर्नुपर्ने भयो। अङ्‌ग्रेजी नाटककार शेक्सपियरले म्याकबेथ नामको आफ्नो नाटकमा यस्तो लेखे: “शोकलाई शब्दको सहाराले हृदयबाट निकालिदेऊ, नत्र शोकले तिम्रो हृदयमा कब्जा जमाउनेछ र त्यसलाई छिया-छिया पारिदिनेछ।”
त्यसैले धैर्य गर्दै अनि सहानुभूति देखाउँदै तपाईँको कुरा सुनिदिने “साँचो मित्र”-सित आफ्नो भावना पोख्नुभयो भने तपाईँले केही हदसम्म राहत महसुस गर्नुहुनेछ। (हितोपदेश १७:१७) आफ्नो अनुभव र भावनालाई शब्दमा व्यक्‍त गर्नुभयो भने तपाईँ आफैले त्यो अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ र त्यसको सामना गर्न मदत पाउनुहुनेछ। अनि तपाईँको कुरा सुनिदिने व्यक्‍तिले पनि विगतमा तपाईँले जस्तै दुःख भोगेका रहेछन्‌ र शोक सहन सफल भएका रहेछन्‌ भने तिनले तपाईँलाई केही व्यावहारिक सुझाव दिन सक्छन्‌। आफ्नो बच्चा गुमाएकी एउटी महिलाले त्यस्तै वियोग सहेकी अर्की महिलासित कुराकानी गर्दा राहत पाएको महसुस गरिन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “मेरो जस्तै परिस्थितिको सामना गरेको अरू पनि रहेछ। तिनले आफ्नो सोचाइ र भावनालाई सन्तुलनमा राख्न सकेकी रहेछिन्‌ अनि तिनी त्यसलाई पार गरेर बिस्तारै पहिलाको जस्तै जीवन जिउन सिक्दै छिन्‌ भनेर थाह पाउँदा मैले निकै हौसला पाएँ।”
आफ्ना भावनाहरू लेखेर राख्दा शोक व्यक्‍त गर्न मदत पुग्छ भनेर बाइबलका उदाहरणहरूले देखाउँछ
तर तपाईँलाई आफ्नो भावना व्यक्‍त गर्न सजिलो लाग्दैन भने नि? साउल र जोनाथनको मृत्यु भएपछि दाउदले वेदनाले भरिएको शोकगीत रचेर आफ्नो शोक व्यक्‍त गरे। दाउदले शोक गर्दै रचेको त्यो गीत बाइबलको दोस्रो समुएलको किताबको भाग बन्यो। (२ समुएल १:१७-२७; २ इतिहास ३५:२५) त्यसैगरि कसै-कसैलाई आफ्नो भावना बोलेर भन्दा लेखेर व्यक्‍त गर्न सजिलो लाग्छ। पति गुमाएकी एउटी महिलाले आफ्नो भावना लेखेर राख्ने गरेको र केही दिनपछि आफूले लेखेको कुरा फेरि हेर्ने गरेको बताइन्‌। त्यसो गर्दा तिनले आफ्नो मनको बोझ हलुका भएको महसुस गरिन्‌।
चाहे बोलेर होस्‌ वा लेखेर, आफ्नो भावना व्यक्‍त गर्नुभयो भने तपाईँले हलुका महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। साथै त्यसले गलतफहमीहरू हटाउन पनि मदत गर्छ। बच्चा गुमाएकी एउटी महिला यसो भन्छिन्‌: “केही दम्पतीहरूले बच्चा गुमाएपछि सम्बन्धविच्छेद गरेका घटनाहरू म र मेरो श्रीमान्‌ले सुन्यौँ। हामी त्यस्तो भएको पटक्कै चाहँदैन थियौँ। त्यसैले एकअर्कालाई दोष लगाउने विचार मनमा आउनेबित्तिकै वा एकअर्कादेखि रिस उठ्‌नेबित्तिकै हामी त्यसबारे कुरा गरिहाल्थ्यौँ। यसो गर्दा हाम्रो सम्बन्ध अझै बलियो भएको महसुस गरेँ।” आफ्नो भावना अरूसामु व्यक्‍त गर्नुभयो भने एउटै किसिमको चोट सहनुपरे पनि अरूको मनमा आउने भावना र शोक गर्ने तरिका तपाईँको भन्दा फरक हुन सक्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुहुनेछ।
मनमा गुम्सिएको भावना व्यक्‍त गर्न मदत दिने अर्को तरिका रुनु पनि हो। बाइबल भन्छ, “रुने एउटा समय छ।” (उपदेशक ३:१, ४) आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको मृत्यु हुँदा पक्कै पनि त्यो रुने समय हो। रुँदा मनको घाउ निको पार्न मदत पुग्छ भनेर धेरैले महसुस गरेका छन्‌।
आमा गुमाउनुपर्दा आफ्नो मिल्ने साथीले मदत गरेको कुरा एउटी युवती सम्झन्छिन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “उनी सधैँ मेरो साथमा थिइन्‌, मसँगै रोइन्‌ अनि मसँग कुराकानी गरिन्‌। उनीसामु आफ्नो भावना खुलेर व्यक्‍त गर्न मलाई सजिलो भयो अनि त्यसो गर्नु जरुरी पनि थियो। उनको अगाडि रुन मलाई पटक्कै अप्ठेरो लागेन।” (रोमी १२:१५ हेर्नुहोस्‌) तपाईँले पनि रुन अप्ठेरो मान्‍नु पर्दैन। हामीले अगाडि विचार गरेझैँ बाइबलमा आँसु झार्दै आफ्नो शोक खुलेर व्यक्‍त गरेका थुप्रै विश्‍वासी पुरुष र स्त्रीको उदाहरण छ। येसु पनि तिनीहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो।—उत्पत्ति ५०:३; २ समुएल १:११, १२; युहन्‍ना ११:३३, ३५.
हरेक संस्कृतिका मानिसहरू शोकमा परेको बेला कसैले सान्त्वना दिँदा त्यसको कदर गर्छन्‌
केही समय आफ्ना भावनाहरूमा निकै उतारचढाव आएको सायद तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई अनायासै रुन मन लाग्ला। श्रीमान्‌ गुमाएकी एउटी महिलालाई किनमेल गर्न जाँदा श्रीमान्‌को यादले निकै सताउँथ्यो। (किनकि तिनी अक्सर श्रीमान्‌सितै किनमेल गर्न जाने गर्थिन्‌।) श्रीमान्‌लाई मनपर्ने खानेकुरा देख्दा त्यसमा हात पुगिहाल्थ्यो। त्यसपछि तिनी आँसु थाम्नै सक्दिनथिन्‌। यस्तो अवस्थामा लाचार महसुस नगर्नुहोस्‌। जबरजस्ती आँसु थाम्नुपर्छ भन्‍ने पनि नसोच्नुहोस्‌। शोकमा पर्दा रुनु स्वाभाविक हो र रुनु आवश्‍यक पनि छ भन्‍ने कुरा मनमा राख्नुहोस्‌।
दोषी भावनाले पिरोल्दा
अगाडि पनि विचार गरेझैँ आफूले माया गरेको व्यक्‍ति गुमाउनुपर्दा कसै-कसैलाई दोषी भावनाले पिरोल्छ। युसुफलाई “जङ्‌गली जनावरले माऱ्‍यो” भन्‍ने खबर याकुबले पाए। आफ्नो छोरा युसुफको मृत्युको खबर सुन्दा ती विश्‍वासी पुरुषले अत्यन्तै शोक गरे। तिनले त्यसबेला धेरै शोक गर्नुको कारण हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। युसुफलाई तिनका दाइहरूको हालखबर बुझ्न पठाउने याकुब नै थिए। त्यसैले याकुबलाई दोषी भावनाले सताएको हुन सक्छ। तिनले यस्तो सोचे होलान्‌, ‘मैले किन युसुफलाई एक्लै पठाएछु? मैले उसलाई जङ्‌गली जनावरहरू भएको इलाकामा त्यसरी पठाउनु हुँदैनथ्यो!’—उत्पत्ति ३७:३३-३५.
प्रियजनको मृत्यु हुनुमा आफ्नो पनि गल्ती छ जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन सक्छ। चाहे त्यो कुरा साँचो होस्‌ या नहोस्‌, दोषी महसुस गर्नु भनेको शोक गर्दा उत्पन्‍न हुने एउटा स्वाभाविक भावना हो भनेर मनमा राख्नुहोस्‌। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई दोषी भावनासित सङ्‌घर्ष गर्न मदत पुग्नेछ। अरू भावनाजस्तै दोषी भावनालाई पनि गुम्साएर नराख्नुहोस्‌। आफूलाई कत्ति दोषी महसुस भइरहेको छ भनेर कसैलाई बताउनुभयो भने तपाईँको मनको बोझ निकै हलुका हुन सक्छ।
तर हामीले आफ्नो प्रियजनलाई जति नै माया गरे पनि तिनको जीवन हाम्रो हातमा छैन वा तिनीमाथि “चिताउँदै नचिताएको घटना घट्‌न सक्छ, जसलाई टारेर टार्न सकिँदैन।” (उपदेशक ९:११) साथै तपाईँको मनसाय पनि गलत थिएन। उदाहरणको लागि, आफूले माया गरेको व्यक्‍ति बिरामी पर्दा तपाईँले तिनलाई डाक्टरकहाँ लैजान ढिला गर्नुभयो होला। तर त्यसको मतलब के तपाईँको मनसाय ऊ बिरामी परेर मरोस्‌ भन्‍ने थियो र? पक्कै थिएन! त्यसोभए तिनको मृत्यु हुनुमा के तपाईँ साँच्चै दोषी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्‍न।
कार दुर्घटनामा परेर आफ्नी छोरीको मृत्यु भएपछि एउटी आमाले दोषी भावनासित सङ्‌घर्ष गर्न सिकिन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “उसलाई पठाउनु नै मेरो गल्ती थियो भनेर म सोच्थेँ। तर त्यसरी सोच्नु पटक्कै व्यावहारिक होइन भनेर मैले पछि महसुस गरेँ। उसलाई उसको बुबासित बाहिर पठाउनु गलत थिएन। त्यो त एउटा दुर्घटना मात्र थियो।”
तैपनि ‘मैले यसो गरेको भए हुन्थ्यो’ वा ‘यसो भनेको भए हुन्थ्यो’ जस्तो तपाईँलाई लाग्ला। तर हामीमध्ये को पो त्रुटिरहित छौँ र! बाइबल यसो भन्छ: “हामी सबै जना धेरै चोटि चुक्छौँ। यदि कोही आफ्नो वचनमा चुक्दैन भने ऊ . . . सर्वगुणी मानिस हुन्छ।” (याकुब ३:२; रोमी ५:१२) त्यसैले तपाईँ पनि त्रुटिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्‍ने तथ्यलाई स्विकार्नुहोस्‌। ‘यसो गरेको भए हुन्थ्यो’ वा ‘उसो गरेको भए हुन्थ्यो’ भन्‍ने सोचाइमा घोरिएर विगतलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन बरु त्यस्तो सोचाइले गर्दा तपाईँको मनको घाउ निको हुन झनै लामो समय लाग्न सक्छ।
तपाईँलाई आफू दोषी छु जस्तो लाग्ने ठोस आधार छ भने पनि दोषी भावना हटाउन मदत गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थात्‌ परमेश्‍वरले दिनुहुने क्षमाबारे मनन गर्नुहोस्‌। बाइबल हामीलाई यस्तो आश्‍वासन दिन्छ: “हे याह, तपाईँले हाम्रा गल्तीहरूमा ध्यान दिनुभयो भने हे यहोवा, को खडा रहन सक्ला र? तपाईँ मानिसहरूको पाप साँच्चै क्षमा गर्नुहुन्छ।” (भजन १३०:३, ४) तपाईँ विगतमा फर्किएर कुनै कुरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्‍न। तर विगतमा गरेका गल्तीहरूको लागि परमेश्‍वरसित क्षमा माग्न भने सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ? परमेश्‍वरले तपाईँलाई क्षमा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने के तपाईँले पनि आफूलाई क्षमा गर्नु पर्दैन र?—हितोपदेश २८:१३; १ युहन्‍ना १:९.
तपाईँलाई डाक्टर, नर्स, साथीहरू वा मृत व्यक्‍तिदेखि समेत रिस उठ्‌न सक्छ। यसरी रिस उठ्‌नु पनि स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो भन्‍ने कुरा मनमा राख्नुहोस्‌। आफूले माया गरेको व्यक्‍ति गुमाउनुपर्दा मनमा पीडासँगसँगै रिस पनि उत्पन्‍न हुन्छ। एक जना लेखकले यस्तो लेखे: “रिस उठ्‌नु गलत होइन तर रिसको झोँकमा गलत कदम चाल्नदेखि चाहिँ होसियार हुनुहोस्‌। आफूलाई रिस उठिरहेको कुरा महसुस गर्नुभयो भने मात्र तपाईँ रिसले ल्याउन सक्ने भयावह नतिजाहरूबाट जोगिनुहुनेछ।”
रिस व्यक्‍त गर्नु पनि तपाईँको लागि मदतकारी हुन्छ। तर रिस व्यक्‍त गर्नुको अर्थ रिसले पड्‌किनु होइन। लामो समयसम्म मनमा रिस पालिराख्नु हानिकारक हुन्छ भनेर बाइबल चेतावनी दिन्छ। (हितोपदेश १४:२९, ३०) तर तपाईँको मनको कुरा बुझिदिने साथीसित त्यसबारे कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको मन हलुका हुनेछ। साथै रिस उठ्‌दा व्यायाम गर्नु पनि कसै-कसैले मदतकारी पाएका छन्‌।—एफिसी ४:२५, २६ पनि हेर्नुहोस्‌।
हुनत आफ्नो भावना इमानदार हुँदै अनि खुलेर व्यक्‍त गर्नु आवश्‍यक छ तर त्यसो गर्दा हामी होसियार पनि हुनुपर्छ। भावना व्यक्‍त गर्नु र अरूमाथि आफ्नो भावना लाद्‌नुमा आकाश-जमिनको भिन्‍नता छ। तपाईँलाई रिस उठ्‌दा वा दिक्क लाग्दा त्यसको दोष अरूमाथि नथोपर्नुहोस्‌। आफ्नो भावना खुलेर व्यक्‍त गर्नुहोस्‌ तर अरूलाई बोलीको बाणले प्रहार नगर्नुहोस्‌। (हितोपदेश १८:२१) शोक सहने सबैभन्दा मदतकारी तरिकाबारे अब हामी छलफल गर्नेछौँ।
परमेश्‍वरले दिनुहुने मदत
बाइबल हामीलाई यस्तो आश्‍वासन दिन्छ: “यहोवा टुटेका हृदय भएकाहरूको नजिक हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ।” (भजन ३४:१८) हो, आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको मृत्यु हुँदाको चोट सहन अरू कुनै पनि कुराले भन्दा परमेश्‍वरसितको सम्बन्धले तपाईँलाई मदत गर्नेछ। कसरी? अहिलेसम्म छलफल गरिएका सबै सुझाव परमेश्‍वरको वचन बाइबलमा आधारित छन्‌ वा त्यसमा पाइने सल्लाहसित मेल खान्छन्‌। ती सुझावहरू लागू गर्नुभयो भने तपाईँले शोक सहन मदत पाउनुहुनेछ।
साथै प्रार्थना गर्नुको महत्त्वलाई हल्कासित नलिनुहोस्‌। बाइबल हामीलाई यस्तो आग्रह गर्छ: “आफ्नो भारी यहोवामा बिसाऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ।” (भजन ५५:२२) सहानुभूति देखाउने साथीसित कुराकानी गर्दा त तपाईँले मदत पाउनुहुन्छ भने “सबै सान्त्वनाका परमेश्‍वर”-सामु आफ्नो मनको बह पोखाउँदा झन्‌ कत्ति हलुका महसुस हुन्छ होला!—२ कोरिन्थी १:३.
प्रार्थना गर्दैमा हामीले आफसेआफ हलुका महसुस गर्ने होइन। बरु “प्रार्थना सुन्‍नुहुने परमेश्‍वर”-ले मनैदेखि उहाँसित पवित्र शक्‍ति माग्नेहरूलाई त्यो दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। (भजन ६५:२; लुका ११:१३) अनि परमेश्‍वरको सक्रिय शक्‍तिले तपाईँलाई प्रत्येक दिन आइपर्ने चिन्ता-फिक्री र चुनौतीहरूको सामना गर्न “असाधारण शक्‍ति” दिनेछ। (२ कोरिन्थी ४:७) यो कुरा नबिर्सनुहोस्‌, परमेश्‍वर आफ्ना वफादार सेवकहरूलाई जस्तोसुकै समस्याको सामना गर्न मदत गर्न सक्नुहुन्छ।
छोरी गुमाएकी एउटी महिलाले तिनी र तिनको श्रीमान्‌लाई शोक सहन प्रार्थनाले निकै मदत गरेको कुरा बताइन्‌। तिनी भन्छिन्‌, “रातको समयमा निराशाले छोप्दा र असह्‍य महसुस हुँदा हामी सँगै बसेर यहोवालाई प्रार्थना गर्थ्यौँ। पहिला छोरीसँगै गरेका कामहरू पहिलो चोटि उनीविना गर्नुपर्दा, जस्तै: पहिलो चोटि उनीविना सभा अनि अधिवेशन जानुपर्दा हामीले बलको लागि यहोवालाई प्रार्थना गऱ्‍यौँ। बिहान आँखा खुल्दा कहिलेकाहीँ वास्तविकता स्विकार्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो बेला हामी प्रार्थना गरेर यहोवासित मदत माग्थ्यौँ। घरभित्र एक्लै छिर्नुपर्दा समेत मलाई किन-किन एकदमै गाह्रो महसुस हुन्थ्यो। त्यसैले हरेक चोटि एक्लै घर आउनुपर्दा म मनोशान्तिको लागि यहोवालाई प्रार्थना गर्थेँ।” त्यसरी प्रार्थना गर्दा आफूले निकै मदत पाएको कुरामा यी वफादार महिला पूर्णतया विश्‍वस्त छिन्‌। निरन्तर प्रार्थना गर्दा ‘परमेश्‍वरको शान्ति, जुन मानिसको समझभन्दा बाहिरको छ, त्यसले तपाईँको हृदय र सोच्ने क्षमताको रक्षा गरेको’ तपाईँले पनि महसुस गर्नुहुनेछ।—फिलिप्पी ४:६, ७; रोमी १२:१२.
परमेश्‍वरले हामीलाई चोट सहन मदत दिन सक्नुहुन्छ। येसुका एक जना चेला पावलले यसो भने: “उहाँले हाम्रा सबै परीक्षामा सान्त्वना दिनुहुन्छ ताकि . . . हामीले हरप्रकारका परीक्षामा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ।” यो कुरा साँचो हो, परमेश्‍वरले दिनुहुने मदतले हाम्रो पीडालाई स्वतः हटाउँदैन तर त्यो पीडा सहन भने हामीलाई पक्कै मदत गर्छ। यसको मतलब तपाईँ फेरि कहिल्यै रुनुहुनेछैन वा आफूले गुमाएको व्यक्‍तिलाई बिर्सनुहुनेछ भन्‍ने होइन। बरु तपाईँको चोट निको हुन सक्छ। साथै यस्तो अनुभवले तपाईँलाई अझै समझदार र सहानुभूतिशील बनाउन सक्छ अनि तपाईँले जस्तै पीडा भोगेकाहरूलाई मदत गर्न तपाईँ अझै सक्षम हुनुहुनेछ।—२ कोरिन्थी १:४.
शोक गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?
तपाईँ कसरी आफ्नो शोक व्यक्‍त गर्न सक्नुहुन्छ?
दोषी भावना र रिससित सङ्‌घर्ष गर्न तपाईँ धर्मशास्त्रबाट कस्तो मदत पाउन सक्नुहुन्छ?
आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको वियोग सहन परमेश्‍वरसितको सम्बन्धले तपाईँलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?
चोट सहने केही व्यावहारिक तरिका के-के हुन्‌?
केही व्यावहारिक सुझाव
साथीहरूको मदत स्विकार्नुहोस्‌: तपाईँको कोही साथी तपाईँलाई मदत गर्न चाहन्छन्‌ भने त्यो मदत स्विकार्न नहिचकिचाउनुहोस्‌। तपाईँलाई मदत गर्दा तिनीहरूले आफूलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्‍ने कुरा देखाउने मौका पाउन सक्छन्‌ किनकि तिनीहरूलाई आफ्नो भावना शब्दमा व्यक्‍त गर्न गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ।—हितोपदेश १८:२४.
आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्‌: शोकमा पर्दा सुरु-सुरुमा तपाईँलाई निकै थकाइ लाग्न सक्छ। त्यसैले तपाईँको शरीरलाई प्रशस्त आराम, स्वस्थकर व्यायाम र पोसिलो खानेकुरा पहिलाभन्दा झन्‌ धेरै आवश्‍यक पर्छ। त्यसकारण सल्लाह-सुझावको लागि आफ्नो डाक्टरलाई नियमित रूपमा भेट्‌नु फाइदाजनक हुन सक्छ।
महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई थाती राख्नुहोस्‌: घर बेच्ने वा अर्को जागिर खानेजस्ता कुराहरूबारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने स्पष्टसित सोच्न सक्ने अवस्थासम्म नपुगुन्जेल सम्भव छ भने कुर्नुहोस्‌। (हितोपदेश २१:५) आफ्नो पतिको मृत्यु भएको केही समयमै पतिको लगभग सबै सामान अरूलाई दिएको एउटी स्त्री सम्झिन्छिन्‌। पतिको आफूलाई मनपर्ने सामानहरू पनि अरूलाई दिइसकेको तिनले पछि मात्र चाल पाइन्‌।
आफैप्रति धीरजी हुनुहोस्‌: धेरैजसो मानिसहरूले सोचेजस्तो शोक केही समयमै हराएर जाँदैन। प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रियजनको याद दिलाउने कुराहरूले हाम्रो मनको घाउ बल्झाउन सक्छ। केही खास चित्रहरू देख्दा, गीतहरू सुन्दा, यहाँसम्म कि कुनै बास्नाले समेत आँखामा आँसु ल्याइदिन्छ। एउटा अनुसन्धानले शोक गर्ने तरिकाबारे यसरी व्याख्या गरेको छ: “शोकमा परेको व्यक्‍तिको भावना छिनछिनमा र आसै नगरेको बेला परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसको मतलब, शोकमा परेको व्यक्‍ति आफूले गुमाएको प्रियजनलाई घरिघरि नसम्झिन निकै प्रयास गर्छन्‌ होला तर पनि आसै नगरेको बेला विगतका सम्झनाहरू उर्लेर आउन सक्छ।” यस्तो बेला यहोवाले गर्नुभएका बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू सम्झनुहोस्‌।—फिलिप्पी ४:८, ९.
अरूको अवस्था बुझ्नुहोस्‌: अरूप्रति धीरजी हुने कोसिस गर्नुहोस्‌। तिनीहरूलाई पनि अप्ठेरो लागिरहेको होला भनेर बुझ्नुहोस्‌। के भन्‍ने भनेर थाह नभएकोले तिनीहरूले तपाईँलाई चोट पुग्ने कुरा भन्‍न सक्छन्‌।—कलस्सी ३:१२, १३.
शोक सहन औषधी वा रक्सीको सहारा लिनदेखि होसियार हुनुहोस्‌: औषधी वा रक्सीले छिनभरको लागि मात्र राहत दिन्छ। डाक्टरसित सल्लाह गरेर मात्र औषधी खानुपर्छ। तर होसियार हुनुहोस्‌; कुनै-कुनै औषधीको लत लाग्न सक्छ। साथै औषधीले हाम्रो शोकलाई अझै लम्ब्याइदिन सक्छ। एक जना डाक्टरले यस्तो चेतावनी दिए: “दुःख भोग्नुपर्छ, त्यससित लड्‌नुपर्छ र बिस्तारै त्यो हराउँदै जानेछ। तर औषधीको सहारा लिएर दुःख बिर्सन खोज्नुभयो भने दुःख हराउनुको साटो हामी झनै लामो समयसम्म शोकमा डुब्नेछौँ।” यहोवाका उद्देश्‍यहरूबारे मनन गर्नुभयो भने तपाईँले शोक सहन मदत पाउनुहुनेछ।—भजन १:२; ११९:९७.
पहिलाकै दिनचर्यामा फर्कनुहोस्‌: काममा वा किनमेलको लागि जान वा अरू जिम्मेवारी पूरा गर्न सुरु-सुरुमा तपाईँले आफैलाई जबरजस्ती गर्नुपर्ला। तर पहिलाकै दिनचर्यामा फर्किसकेपछि त्यसो गर्नु फाइदाजनक साबित भएको तपाईँ आफैले महसुस गर्नुहुनेछ। आध्यात्मिक गतिविधिमा पूरापूर भाग लिएर आफैलाई व्यस्त बनाउनुहोस्‌।—१ कोरिन्थी १५:५८ तुलना गर्नुहोस्‌।
बिस्तारै पीडा कम हुँदै जाँदा दोषी महसुस नगर्नुहोस्‌: हुनत यो कुरा अनौठो लाग्ला तर शोकमा परेको कोही-कोही आफ्नो पीडा कम हुँदै गएको चाहँदैनन्‌ किनकि तिनीहरूलाई त्यसो हुनु भनेको आफूले गुमाएको प्रियजनप्रतिको माया सेलाउँदै गएको सङ्‌केत हो जस्तो लाग्न सक्छ। तर यस्तो सोच्नु ठीक होइन। पीडा कम हुँदै जाँदा आफ्नो प्रियजनसित बिताएका रमाइला पलहरू सम्झन सक्नुहुन्छ, जुन सम्झना तपाईँसित सधैँभरि रहनेछन्‌।—उपदेशक ३:१, ४.
औधी चिन्तित नहुनुहोस्‌: सायद तपाईँलाई ‘अब म के गर्ने होला?’ भन्‍ने चिन्ताले सताउन सक्छ। तर बाइबलले हामीलाई भोलिको चिन्ता नगर्न सल्लाह दिएको छ। श्रीमान्‌ गुमाएकी एउटी स्त्री भन्छिन्‌: “भोलिको चिन्ता नगरी जीवन बिताउँदा मैले चोट सहन निकै बल पाएकी छु।” येसुले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्‍नुभयो: “भोलिको चिन्ता कहिल्यै नगर किनभने भोलिको चिन्ता भोलिले नै गर्नेछ।”—मत्ति ६:२५-३४.
शेयर गर्ने शेयर गर्ने म यो चोट कसरी सहन सक्छु?
we पृ. १४-१९
“यो हुनै सक्दैन!”
के मैले यस्तो महसुस गर्नु स्वाभाविक हो?
अरूले कसरी मदत गर्न सक्छन्‌?
मृतकहरूका लागि पक्का आशा
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प तपाईँको प्रियजनको मृत्यु हुँदा
शेयर गर्ने शेयर गर्ने तपाईँको प्रियजनको मृत्यु हुँदा